> Resource> Mac> Olee naghachi Mac keynote File
Olee Otú M Pụrụ Naghachi Lost keynote on Mac?
M na-arụ ọrụ a keynote ngosi maka 4 awa, na m zọpụta ya na m MacBook Air. Ọ bụ ná ngwụsị nke abalị na emeghị m aghọta na m ehichapụ ya ọtụtụ minit e mesịrị. O di nwute na m synced na iCloud na ọ bụghị na ahịhịa abughi. Ya mere m nsogbu bụ na m nwere ike ka na-naghachi m furu efu keynote faịlụ? Daalụ nke ukwuu!
Nọmalị, ị nwere ike weghachite gị furu efu keynote faịlụ site iCloud. Ọ bụrụ na ọ bụghị na a synced gị iCloud ma, ị na-adịghị na-adị oke nchegbu kwa. Ọ dịghị mkpa ọbụna mgbe i bupụrụ ya si ahịhịa. The furu efu keynote bụ ka gị na Mac na nhichapụ-eme ka ọ keerughi. Tupu ọ na-overwritten site ọhụrụ data na gị Mac, ị ka nwere ohere iji weghachi ya.
Wondershare Data Recovery for Mac Bụ otu nke kasị mma ngwa n'ihi na ị na-agbake Mac keynote faịlụ. Ọ bụ ike naghachi furu efu, ehichapụ, Ị na rụrụ arụ keynote faịlụ site na gị Mac na a kama ụzọ dị mfe. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile Mac kọmputa, gụnyere MacBook usoro, iMac, Mac Obere na Mac Pro. Plus, a ngwa rụrụ Mac keynote mgbake na mfe na-eji na n'ihe ize ndụ-free ụzọ.
Download ịba uru naghachi Mac keynote faịlụ ugbu a.
Naghachi keynote on Mac na 3 Nzọụkwụ
Ihe mbụ mbụ: kara gị mma ịkwụsị iji gị Mac mgbe keynote furu efu. Ma ọ nwere ike eleghị anya a ga overwritten site ọhụrụ data na gị Mac.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode iji weghachi keynote on Mac
Mgbe wụnye na-agba ọsọ na ngwa na gị Mac, ị ga-enweta ihe interface dị ka ndị na. Ị pụrụ ịhụ 3 mgbake ụdịdị na ntụziaka na ya.
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ keynote on Mac, ka na-"Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 Iṅomi nkebi / olu na gị keynote furu efu site
Ebe a ị dị nnọọ mkpa họrọ nkebi / olu na gị keynote furu efu site na pịa "iṅomi" ịchọ ya.
Ọ bụrụ na gị keynote furu efu n'ihi formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi Mac keynote faịlụ
Ugbu a niile hụrụ data na na nkebi ga-depụtara na window mgbe ịgụ isiokwu. Ị nwere ike ele faịlụ aha ke window elele ma gị furu efu keynote nwere ike agbapụtawo ma ọ bụ.
Ọ bụrụ na ọ hụrụ, ị dị nnọọ mkpa akara ya na pịa "Naghachi" button ke window iji zọpụta ya azụ gị Mac.
Cheta na: Biko adịghị azọpụta ya azụ ka mbụ ọnọdụ iji zere data overwritten.